Njikwa Nchọta Google - chee maka Google Search Console (nke a na -akpọbu ngwa ọrụ webmaster) dị ka usoro nyocha iji nyere gị aka nyochaa ọhụhụ gị na nsonaazụ ọchụchọ. Google Search Console ga -achọpụta nsogbu dị na saịtị gị ma nyere gị aka inyocha ọkwa gị ruo n'ókè. Ekwuru m "ruo n'ókè" n'ihi na Google anaghị enye data zuru oke maka ndị ọrụ Google banyere. Ọzọkwa, achọtala m njehie ụgha ole na ole na njikwa na -apụta wee pụọ. Ọzọkwa, ụfọdụ mperi ndị ọzọ anaghị emetụta arụmọrụ gị nke ukwuu. Nitpicking nsogbu Google Search Console nwere ike tufuo nnukwu oge… yabụ kpachara anya.
Nchịkọta ọwa YouTube - YouTube bụ igwe ọchụchọ nke abụọ kachasị na enweghị ihe ngọpụ ịghara ịnọ ebe ahụ. E nwere tọn iri ụdị vidiyo dị iche iche na azụmahịa gị kwesịrị ịdị na -arụ ọrụ iji kpụga okporo ụzọ organic na vidiyo na ụzọ ntụgharị site na YouTute gaa na saịtị gị. Agaghị ekwu na vidiyo ndị ahụ ga -eme ka ahụmịhe ndị ọbịa gị na webụsaịtị nke gị. Anyị na -anwa ịnwe vidiyo dị mkpa na ibe ọ bụla nke saịtị azụmahịa iji mee ka ndị ọbịa nwee ekele maka ya n'ịgụ ọtụtụ ozi na ibe ma ọ bụ isiokwu.
SEMrush - E nwere ọtụtụ ndị mara mma SEO ngwaọrụ nọ ebe ahụ maka nchọta organic. Ejirila m SEMrush ruo ọtụtụ afọ, yabụ na anaghị m achọ ịmanye gị karịa otu n'ime ndị ọzọ nọ ebe ahụ… ga-enwe nweta ngwaọrụ ndị a iji nyochaa arụmọrụ nchọta organic gị n'ezie. Ọ bụrụ na ị mepee ihe nchọgharị wee malite ilele ibe nsonaazụ ọchụchọ (ỌRỤ) ị na -enweta nsonaazụ nkeonwe. Ọbụlagodi na ịbanyeghị na na windo nkeonwe, ọnọdụ gị nwere ike imetụta nsonaazụ ị na -enweta na Google ozugbo. Nke a bụ mmejọ m na -ahụkarị ka ndị ahịa na -eme mgbe ha na -elele arụmọrụ nke ha ... Ngwaọrụ dị ka nke a nwekwara ike inyere gị aka ịchọpụta ohere maka ijikọ ndị na -ajụ ase dị ka video, ma ọ bụ na -emepe emepe ọgaranya snippets banye na saịtị gị iji melite ọhụhụ gị.
Ịnọgide na -enwe ọhụhụ dị elu na nsonaazụ ọchụchọ na okwu ọchụchọ dị mkpa dị mkpa maka ọganiihu ahịa dijitalụ nke azụmahịa gị. Ọ dị mkpa iburu n'uche na SEO abụghị ihe na -adị eme… Ọ bụghị oru ngo. Maka gịnị? N'ihi mgbanwe ndị dị na mpụga nke njikwa gị:
Enwere saịtị na -asọrịta mpi megide gị maka ogo dị ka akụkọ, akwụkwọ ndekọ aha, na saịtị ozi ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ha nwere ike merie ọchụchọ ndị dị mkpa, nke ahụ pụtara na ha nwere ike ịkwụ gị ụgwọ maka ịnweta ndị na -ege ha ntị - ma ọ bụ na mgbasa ozi, nkwado, ma ọ bụ ebe a ma ama. Ezigbo ihe atụ bụ Yellow Pages. Peeji edo edo chọrọ imeri nsonaazụ ọchụchọ nke enwere ike ịchọta saịtị gị ka a manye gị ịkwụ ha ụgwọ ka iwelie ọhụhụ gị.
Ụlọ ọrụ SEO gị ma ọ bụ onye na -enye ndụmọdụ kwesịrị ịdị na -egwu ala na data a ma na -enyocha n'ezie ma ị na -eme nke ọma na mgbanwe mgbanwe ndị a dị na mpụga.
Onu ogugu nke ndi obia na -eleta kwa onwa n'afo n'afo - N'iburu n'uche usoro oge maka okwu ọchụchọ metụtara azụmahịa gị, ị ga -achọkwa lelee ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa nke saịtị gị na -enweta site na ngwa ọchụchọ (nke ọhụrụ na nke na -alọta) ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Oge ihe omume na -emetụta ọtụtụ azụmaahịa, yabụ inyocha ọnụọgụ ndị ọbịa gị kwa ọnwa ma e jiri ya tụnyere oge gara aga bụ ụzọ dị mma iji hụ ma ị na -emeziwanye ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ igwu n'ime hụ ihe kacha mkpa.
Ọnụ ọgụgụ nke ntụgharị site na okporo ụzọ Organic - Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na -ahụ maka ndụmọdụ gị anaghị ejikọ okporo ụzọ na ọnọdụ na nsonaazụ azụmaahịa n'ezie, ha na -ada ada gị. Nke ahụ apụtaghị na ọ dị mfe ime… ọ bụghị. Njem ndị ahịa maka ndị na -azụ ahịa na azụmaahịa adịghị ọcha ụlọ nkwonkwo ahịa dị ka anyị ga -achọ iche. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike kee nọmba ekwentị ma ọ bụ arịrịọ weebụ na isi mmalite, anyị na -agbasi ndị ahịa anyị ike ka ha wuo usoro ọrụ ọkọlọtọ nke na -edepụta isi mmalite ahụ. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere agbụ eze, dịka ọmụmaatụ, na -ajụ ndị ahịa ọhụụ otu ha siri nụ maka ha… ọtụtụ na -ekwu ugbu a Google. Ọ bụ ezie na nke ahụ adịghị iche n'etiti mkpọ maapụ ma ọ bụ SERP, anyị maara na mbọ anyị na -etinye maka ha abụọ na -akwụ ụgwọ.
Ilekwasị anya na ntọghata na -enyekwara gị aka ebuli maka mgbanwe! Anyị na-akwalite ndị ahịa anyị ọtụtụ ka ha jikọta nkata ndụ, pịa oku, ụdị dị mfe, na onyinye iji nyere aka mụba ọnụego mgbanwe. Kedu ihe dị elu ma na -eto okporo ụzọ organic gị ma ọ bụrụ na ọ naghị akwọ ụgbọ ala na ntụgharị ọzọ?!
Ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịtụgharị onye ọbịa ka ọ bụrụ onye ahịa ugbu a, ị ga -achọkwa itinye usoro ịzụlite nke nwere ike inyere ha aka ịnyagharịa njem ndị ahịa ka ha bụrụ otu. Anyị hụrụ akwụkwọ akụkọ n'anya, mkpọsa mkpọsa, ma na-enye ntinye aka iji rata ndị ọbịa ọhụrụ ịlaghachi.
Akụkọ SEO ọkọlọtọ agaghị agwa akụkọ niile
Achọrọ data nke ndị ahịa ọ bụla ka amachachaa, kewaa ha, ma lekwasị anya na ndị na -ege ha ntị na ndị ahịa ha ka ha wee nwee ike bulie saịtị ha ka oge na -aga. Ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye na -ahụ maka gị ga -agarịrịrịrị azụmaahịa gị, onye ị na -eresị ya, ihe ndị dị iche iche gị bụ, wee tụgharịa ya na dashboards na metrik dị mkpa!
Ngosi: Abụ m mmekọ SEMrush m na -ejikwa njikọ njikọ anyị na akụkọ a.